राजकुमारी हया, जोसँगको बिछोडमा कविताहरु लेखिरहेका छन् दुबईका शासक - Aarthiknews
राजकुमारी हया, जोसँगको बिछोडमा कविताहरु लेखिरहेका छन् दुबईका शासक
अब मसँग बस्ने तिम्रो कुनै अधिकार छैन, मलाई केही फरक पर्दैन तिमी मर वा बाँच ।’
‘अब भन्न केही बाँकी छैन । तिम्रो यो घातक मौनताले मलाई तनावमा पारेको छ ।’
प्रेमिकाको कथित धोकामाथि लेखिएका यी पंक्ति कुनै सायर वा कविले लेखेका होइनन् । यसका सर्जक हुन् दुबईका शासक शेख मोहम्मद अल मकतूम । उनकी श्रीमती राजकुमारी हया बिन्त अल हुसैन दुबई छोडेर लण्डन गएकी छिन् । संयुक्त अरब इमिरेट्सको शाही परिवारमा यस्तो हुनु भनेको निकै अचम्मको घटना हो ।
राजकुमारी अहिले सेन्ट्रल लण्डनको कुनै टाउनहाउसमा बसिरहेकी छन् । राजकुमारी हया घोडसवारीमा भाग लिने गर्थिन् तर यस वर्ष भएको रोयल एस्कटमा उनी अनुपस्थित थिइन् ।
केही स्रोतले बीबीसीलाई दिएको जानकारी अनुसार राजकुमारी हया आफ्नो ज्यानको खतरा महसुस गरिरहेकी थिइन् किनभने उनी आफ्ना श्रीमानविरुद्ध कानुनी लडाईं लड्ने तयारी गरिरहेकी थिइन् ।
कुन देशबाट आएकी हुन् राजकुमारी हया ?
राजकुमारी हयाको जन्म सन् १९७४ मे महिनामा भएको हो । उनका पिता जोर्डनका राजा हुसैन थिए र आमाको नाम आलिया अल–हुसैन थियो ।जब राजकुमारी हया तीन वर्षकी थिइन् तब उनकी आमाको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भयो ।
राजकुमारी हयाले आफ्नो बाल्यकाल ब्रिटेनमा बिताइन् । उनले दुई नीजि विद्यालयमा पढिन् जसमध्ये एक ब्रिस्टलको ब्याडमिन्टन स्कूल हो भने अर्को डोरसेटको ब्रायनस्टन स्कूल हो । त्यसपछि उनले अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीबाट राजनीति, दर्शन र अर्थशास्त्रको पढाई गरिन् ।
आफ्ना केही पुरानो अन्तरवार्तामा उनले फेलकोनरी (बाजलाई पाल्ने), निशानाबाजी र ठूलो मेसिनको शौख भएको बताएकी थिइन् । यसबाहेक उनले आफू जोर्डनमा ठूलो ट्रक चलाउने लाइसेन्स पाउने एकमात्र महिला भएको दाबी पनि गरेकी थिइन् ।
राजकुमारी हयालाई घोडसवारीको पनि ठूलो शौख छ । जब उनी २० वर्षकी थिइन् तब उनले घोडसवारीलाई आफ्नो करियरको रुपमा छानेकी थिइन् । घोडसवारीमा राजकुमारी हयाले सन् २००० को ओलम्पिक खेलमा जोर्डनको प्रतिनिधित्व पनि गरेकी थिइन् । उनी उक्त ओलम्पिक खेलमा आफ्नो देशको ध्वाजावाहक पनि थिइन् ।
‘म भाग्यमानी छु कि उनको नजिक छु’
सन् २००४ को अप्रिल १० मा राजकुमारी हयाले दुबईका शासक र संयुक्त अबर इमिरेट्सका उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री शेख मोहम्मदसँग विवाह गरिन् । त्यतिबेला राजकुमारी ३० वर्षकी थिइन् भने शेख मोहम्मद ५३ वर्षका थिए ।
राजकुमारी हया उनकी छैटौं श्रीमती थिइन् । शेख मोहम्मदका विभिन्न श्रीमतीबाट जम्मा २३ सन्तान भएको बताइन्छ । राजकुमारीलाई झैं शेख मोहम्मदलाई पनि घोडाको निकै शौख थियो । उनी गो–डोल्फिन नामको घोडाको तबेलाका मालिक पनि थिए । यी दुईको विवाह अम्मानमा भएको थियो ।
विवाहपछि राजकुमारी हयाले थुप्रै पटक शेख मोहम्मदसँगको आफ्नो सम्बन्धबारे जानकारी दिँदै आफू अत्यधिक खुसी भएको बताएकी थिइन् । दुबैले आफ्नो रमाइलो जीवन दार्साउने पेन्टिङ पनि बनाए ।
इमिरेट्स वुमेन म्यागजिनको २०१६ को अंकमा राजकुमारी हयाले शेख मोहम्मदबारे भनेकी थिइन्, ‘उनले जे गर्छन् त्यो अद्भूत हुन्छ । म हरेक दिन भगवानलाई धन्यवाद दिन्छु किनभने म उनको यति नजिक छु ।’ यसै म्यागजिनमा राजकुमारी हया र शेख मोहम्मदलाई एक उत्कृष्ट जोडीको रुपमा पेश गर्दै आर्टिकल पनि प्रकाशित गरिएको थियो ।
सम्बन्ध किन चिसियो ?
गत वर्ष जब शेख मोहम्मदकी जेठी छोरी शेखा लतिफाले देशबाट भाग्ने कोसिस गरिन् तब राजकुमारी हया र शेख मोहम्मदबीचको सम्बन्धमा पनि फाटो आएको थियो ।
संसारभरी फैलिएको एउटा भिडियोमा ३३ वर्षकी राजकुमारी शेखा लतिफाले उनको परिवारमा कसैलाई पनि स्वतन्त्रतापूर्वक आफूलाई मनपर्ने कुरा गर्ने अधिकार नभएको दाबी गरेकी थिइन् ।
मिडिया रिपोर्टमा शेखा लतिफा समुद्रको बाटो हुँदौ संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट भाग्न सफल भएको बताइयो । यसमा उनलाई फ्रान्सका एक व्यक्तिले सहयोग गरेको बताइयो । तर भारतको समुद्री सीमा नजिकैको सेनाले उनलाई रोके र पुनः दुबई पठाए ।
डिसेम्बरमा उनका केही तस्बिर जारी भए जसमा उनी इमिरेट्समा आयरल्याण्डका पूर्व राष्ट्रपति मेरी रोबिनसनसँग बसिरहेको देखिएकी थिइन् । त्यतिबेला दुबईको प्रशासनले घर छोडेर भागेकी शेखा लतिफ अन्य देशमा उत्पीडनको शिकार हुनसक्ने बताउँदै अब उनी दुबईमा सुरक्षित भएको बताएको थियो ।
यो घटनापछि राजकुमारी हयालाई यसबारे विभिन्न जानकारी प्राप्त भएको र उनका श्रीमानले उनीमाथि दबाब दिन सुरु गरेको बताइन्छ । राजकुमारी हयाका नजिकका स्रोतले बीबीसीलाई दिएको जानकारी अनुसार उक्त पूरा घटनाक्रमपछि शेख लतिफामाथि पनि दबाब पर्न थालेको थियो । राजकुमारी हया ब्रिटेन पुग्नुअघि जर्मनी पनि गएकी थिइन् ।
शेख मोहम्मदले अहिलेसम्म राजकुमारी हयाले दुबई छोडेको कुनै आधिकारिक बयान दिएका छैनन् । उनले १० जूनमा इन्स्टाग्राममा एउटा पोष्ट राखेका थिए जसमा उनले धोका सम्बन्धि कविता लेखेका थिए ।
यतिमात्रे होइन शेख मोहम्मदको आफ्नो नामको एउटा वेबसाइटनै छ जसमा उनी धेरैजसो कविता लेखिरहन्छन् । टाइम्स अफ लण्डनको एक रिपोर्टअनुसार राजकुमारी हयासँग उनका ११ र सात वर्षका दुई सन्तान पनि भागेका छन् । यी बच्चाहरुको नाम शेख जायद र शेखा अल जलिला बताइएको छ ।
यो रिपोर्ट अनुसार राजकुमारी हया आफ्ना दुई सन्तानसँग केनसिंगटन प्यालेसको नजिकै कुनै बंगलामा बसिरहेकी छिन् जसको मूल्य करिब १०७ मिलियन डलर हो । शाही परिवारको एक नजिकको स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार राजकुमारी हया ब्रिटेनमा राजनीतिक शरण लिने कोसिस गरिरहेकी छिन् । साथै उनी शेख मोहम्मदसँग सम्बन्धविच्छेद लिने तयारीमा पनि छिन् ।
यद्यपि, युएईको शाही परिवारमा महिलाले सम्बन्धविच्छेद पाउनु सजिलो छैन किनभने कुनै पनि विवाहसँग दुई देशको राजनीतिक र कुटनीतिक सम्बन्ध पनि जोडिएको हुन्छ । राजकुमारी हया जोर्डनका राजा अबदुल्लाह द्वितीयका सौतेनी बहिनी हुन् ।
राजकुमारी हयाले शेख मोहम्मदबाट सम्बन्धविच्छेद पाउँछिन् वा उनी पनि फर्किएर दुबई जानेछिन् त्यो समयले नै बताउनेछ । तर अहिले शेख मोहम्मद लगातार कविता लेखिरहेका छन् ।
उनले आफ्नो हालैको एउटा पोष्टमा लेखेका छन्ः ‘मलाई एउटा पीडा भएको छ जो कुनै औषधीले कम हुन सक्दैन, कुनै पनि हाकिमसँग यसको उपचार छैन ।’